Misongadina any Etazonia ny filma “Famadihana” novokarin’i P. Randrianary sj - Lakroan'i Madagasikara on line - Les actualités sociales et religieuses à Madagascar
Filma sokajiana amin’irony antsoina hoe “documentaire” irony ny tantara “famadihana”. Araka izany dia tantara marina niseho tamina fianakaviana malagasy iray izy io. Tsy mitantara fe mitantara ny fizotry ny famadihana araka ny maha fomba azy fotsiny ihany anefa. Mampisongadina tontolo ifamahofahoan’ny mangidy sy ny mamy manko ny mpamokatra azy, dia I Mompera Jacques Randrianary.
Miainga amin’ ny alahelo noho ny fahafatesan’ny renim-pianakaviana iray, ny tantara. Niteraka fifanolanana teo amin’ny fianakaviana ihany koa anefa ny toerana nandevenana azy. Nisy ny nenina. Ny fanatanterahana ny famadihana no nandravona ny disadisa rehetra, tato aoriana. Entin’ny mpamokatra miara-miaina ny ranomasom-pahoriana sy ny ranomasom-pifalian’ity fianakaviana ity ny mpijery. Avoitrany amin’ny fizotry ny tantara fa nampiombona sy nampihavana ilay “famadihana”.
Notsongaina tanatin’ny maro
Tsy mahagaga raha nanaitra ny mpikarakara hetsika goavana mikasika ny sarimihetsika any Etazonia ny “Famadihana”. Kolontsaina sy tontolom-piarahamonina no asehony sy ampahafantariny. Voafidy ho isan’ireo mpifaninana tamin’ny Cincinnati film festival (any Ohio) ity sarimihetsika ity tamin’ny herintaona (taona 2013). Ankehitriny dia ho azon’ny besinimaro hojerena ao amin’ny hetsika karakarain’ny Paff na Panafrican Film Festival ao Los Angeles ihany koa. Ny 8 sy 10 febroary ho avy izao no hanatanterahana izany.
Ireo hetsika roa ireo dia samy hetsika malaza amin’ny tontolon’ny sarimihetsika amerikanina. Raha ny Paff no asian-teny dia fantatra amin’ny fampisongadinany ireo sarimihetsika afrikanina izy ity. Ezahin’ny tompon’andraikitra ao ny hampivoitra izay lafy tsara rehetra ka tsy mihanona amin’ny fijery manombantombana izy ireo. Reharehan’ny Malagasy ny fisian’ny sarimihetsika voasafidy tanatin’ny maro amina sehatra avo lenta toy izao.
Ny mpamokatra: P. Jacques Randrianary
Pretra zezoita i Jacques Randrianary. Nianatra teolojia tao amin’ny Jesuit School of Theology – Santa Clara University, ka ny anthropologie chrétienne no nanaovany fandalinana. Nahazo ny mari-pahaizana STL sy ny Master izy tamin’ny taona 2010.
Raha ny tontolon’ny sarimihetsika kosa no horesahana dia anisan’ireo Malagasy ankavitsiana manana mari-pahaizana manokana momba izany i P. Jacques Randrianary. Tao amin’ny Loyola Marymount University ao Los Angeles izy no nianatra momba ny famokarana sarimihetsika sy televizionina. Nahazo ny mari-pahaizana Master of fine arts (Mfa) avy ao amin’io oniversite amerikanina io. Nisongadina ny asam-pikarohana nataony ka nahazoany ny mention honorable. Raha tsy diso izahay dia izy no hany Malagasy manana io mari-pahaizana Mfa io ankehitriny.
Efa nampianatra ny taranja famokarana sarimihetsika sy televizionina tao amin’ny Loyola Marymount University i P. Jacques Randrianary. Ao amin’ny Loyola Productions (Los Angeles) izy ankehitriny ary “réalisateur” sady “cadreur” no andraikiny. Tsy zoviana amin’ny maro fa raha vao i Los Angeles no resahana dia mby an-tsaina avy hatrany i Hollywood, tanàna malaza indrindra maneran-tany amin’ny sinema. Tontolon’ ny matihanina, manaraka ny fenitra rehetra iraisam-pirenena araka izany no misy azy. Azo lazaina ho manana expertise amin’io sehatra io izy. Tia mifampizara traikefa amin’ny hafa tokoa anefa.
Iray amin’ireo sarimihetsika novokariny ny “Famadihana”. Teo koa ny: Long Spoon, Brigde, A Dieu, History Alive, sy ny hafa tsy ho voatanisa.
Misimisia ny tahaka itony mba hanandratra avo ny sarimihetsika Malagasy. Hanosika ny mpamokatra eto an-toerana hanao ny tsara hatrany ary hampirisika ny tanora tsy hihanona amin’ny eo ho eo ihany.